Graton मा 8 उत्कृष्ट वर्षहरू! - Graton
फिर्ता आउनु भएकोमा स्वागत छ! यो लगभग नोभेम्बर हो, हाम्रो वार्षिकोत्सव महिना, र हामी अलिकति उदासीन महसुस गर्दैछौं। ग्राटन रिसोर्ट र क्यासिनोको भ्रमणले हाम्रो हृदयमा एक सूक्ष्म रोमांच ल्याउँछ। हाम्रा खेलहरूबाट बत्ती र आवाजहरू र विशाल ज्याकपटहरूमा रमाइलोको चिच्याउले साँच्चै रोमाञ्चक वातावरण सिर्जना गर्दछ। ताजा प्रवेशको सुगन्ध र तिर्खा मेटाउने शिल्प ककटेलको स्वादले हाम्रो आत्मा र पेटलाई शान्त पार्छ। हाम्रो प्यारो स्पर्श स्पा र सैलुन हाम्रो दैनिक जीवनको तनाव हटाउँछ। र हाम्रो बॉलरूमले अब घरेलु नामका साथ धेरै बिक्रि भएका शोहरू आयोजना गरेको छ जसले स्टेजलाई हल्लाएको छ।
सबैजना र तपाईं सबैका लागि थोरै कुरा छ, हामी तपाईंलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौं! विगत आठ वर्षदेखि तपाईंले हामीलाई धेरै उत्कृष्ट सम्झनाहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिनुभएको छ र अनप्याक गर्न धेरै इतिहास छ। हाम्रा केही मनमोहक सम्झनाहरू सँगै फर्केर हेरौं!
नोभेम्बर 5, 2013 मा फ्ल्यासब्याक। यहाँ रोहनर्ट पार्कमा हाम्रो घरको पछाडिपट्टि एउटा नयाँ क्यासिनो पप अप हुने बारे शहरमा चर्चा छ। उत्तरी क्यालिफोर्नियाको सबैभन्दा ठूलो क्यासिनो रिसोर्टको अनावरणमा हजारौं आगन्तुकहरू देखा पर्छन्। भीड चर्को, उत्साहित, र आफ्नो भाग्य परीक्षण गर्न दुर्लभ छ! कैंची बाहिर ल्याइएको छ, रिबन काटिएको छ, र संकेत दिइएको छ: हामी खुला छौँ!
हाम्रो होटलको निर्माण केही वर्षपछि २०१६ मा भएको थियो। यसको स्थापना भएदेखि, हामीसँग संसारभरबाट हजारौं आगन्तुकहरू आएका छन्। शीर्ष स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रयासमा, हाम्रो टोलीले AAA फोर डायमण्ड मान्यता प्राप्त गर्न अविश्वसनीय रूपमा कडा मेहनत गरेको छ र सबै उत्तरी क्यालिफोर्नियामा रहनको लागि प्रिमियर स्थानहरू मध्ये एकको रूपमा सूचीको शीर्ष स्थानमा छ।
मनोरञ्जन कार्यक्रम रातहरूमा सधैं हावामा एक निश्चित बिजुली हुन्छ (र हातहरू, घटनामा तपाईंलाई उनीहरूलाई लहराउन भनिएको छ भने तपाईंले वास्ता नगर्नु हुन्छ)। ग्राटन मनोरञ्जन केन्द्र बन्छ जसमा पाहुनाहरू उनीहरूको उत्कृष्ट सप्ताहन्तको पोशाकमा डिनर वा रिफ्रेसमेन्टको लागि शो सुरु हुनु अघि देखा पर्दछन्। पुराना साथीहरूसँग जडान गर्ने, उच्च प्रत्याशित मिति रातमा बाहिर जाने वा तपाईंले लाइभ हेर्ने मौका नपाएको त्यो मनपर्ने कलाकार हेर्नको लागि यो उत्तम अवसर हो।
2019 मा, हामीले हाम्रो बलरूममा 10 कार्यक्रमहरू आयोजना गर्‍यौं र कुल 30,000 टिकटहरू बेच्यौं। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शोले बान्डा एल रेकोडोलाई 2,000 भन्दा बढी उपस्थितिको साथ प्रस्तुत गर्यो! अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शनहरूमा ब्रेट यंग, रसेल पीटर्स, किथ स्वेट र बोइज II मेन समावेश थिए।
रेकर्ड ब्रेकिङ ज्याकपट्स
हाम्रो सम्पत्तीको लागि सबैभन्दा ठूलो आकर्षण पक्कै पनि जित्ने अवसर हो! हाम्रा आगन्तुकहरू मध्ये एक रोलमा हुँदा तपाईंले सधैं क्यासिनो फ्लोरमा ऊर्जा परिवर्तन महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले प्रगतिशीलको घण्टी र सिट्टी सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले एउटा मेसिनको वरिपरि एउटा सानो भीड बनिरहेको देख्न थाल्नुहुन्छ र "मलाई लाग्छ उसले ठूलो कुराको लागि हिर्काएको छ..."
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो ज्याकपट २०२१ को फेब्रुअरीमा मेगाबक्समा अचम्मको १TP2T3.1 मिलियन डलरमा जितिएको थियो! हाम्रा धेरै टोलीका सदस्यहरूले आजसम्म दर्शकहरूबाट आउने स्तब्धता, हाँसो, ताली, र बधाईको झिल्का सम्झन्छन्। हाम्रो विजेताको अनुहारमा देख्न सकिने निर्मल आनन्दको अनुभूति अरूको जस्तो थिएन!
हाम्रा पाहुनाहरूलाई मेगा पैसाको लागि हिट भएको देख्नु भन्दा ठूलो भावना छैन! चाहे यसको स्लट होस् वा टेबल, हाम्रो टोलीले ठूलो कमाई मनाउन र कसैको दिनलाई अझ उज्यालो बनाउन मन पराउँछ। वर्षहरूमा, हामीले गणना गर्न सक्ने भन्दा बढी भुक्तानीहरू भएका छन्। त्यसोभए हामीले भर्खरै कति जना मानिसहरूलाई तातो हात भएको छ भनेर केही अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्यौं।
पछिल्लो महिनामा, हामीसँग 16,000 ज्याकपटहरू छन् र हामी अझै पनि पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यसोभए तपाईं सबैलाई चाँडै यात्रा गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ, त्यो विजयी ऊर्जा जारी राख्नुहोस्! र यदि तपाईंले अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने, हाम्रो Graton पुरस्कार कार्यक्रमको लागि साइन अप गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
अपरिचित व्यक्तिहरूका लागि, हाम्रो ग्राटन पुरस्कार कार्यक्रम तपाइँको खेलको लागि तपाइँलाई पुरस्कृत गर्ने उद्देश्यले र तपाइँको बसाइ र खेलका सबै आवश्यकताहरूको लागि प्रयोग हुने विशेष लाभहरू कमाउने अवसरहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो। प्रत्येक कार्डलाई आफ्नो बनाउनको लागि नाम, उपनाम, वा भाग्यशाली वाक्यांशको साथ अनुकूलित गर्न सकिन्छ, तर हामी यसलाई एक कदम अगाडी लैजान र अलि बढी रमाइलो थप्न चाहन्छौं।
यो हाम्रो लागि एक परम्परा हो जुन हाम्रो हृदयको नजिक र प्रिय घटनाहरू सीमित संस्करण पुरस्कार कार्डहरू छन् जुन यस प्रकारका अवसरहरूको लागि डिजाइन गरीएको हो। हाम्रा हालका धेरै पुरस्कार कार्यक्रम सदस्यहरूले ती सबैलाई सङ्कलन गरेर आत्मामा प्राप्त गरेका छन्! अर्को सङ्कलन योग्य संस्करण हाम्रो चन्द्र नयाँ वर्ष संस्करण हो, जसले वर्षको लागि निर्दिष्ट सुनौलो राशि चिन्ह प्रदर्शन गर्दछ।
विगत आठ वर्षमा हामीले धेरै अचम्मका आगन्तुकहरू आएका छौं। कोही आफ्नो पहिलो अनुभवको लागि, कोही जो एक पटक नीलो चन्द्रमा भ्रमण गर्छन्, र कोही नियमित भएका छन्। हाम्रो सफलतामा तपाईंहरू प्रत्येकको हात छ। तपाईं कारण हुनुहुन्छ कि हामी उत्कृष्टताको लागि प्रयास गर्छौं र ऊर्जाको स्रोत जसले हाम्रो सम्पत्तिलाई जीवनमा ल्याउँछ। हामी आगामी वर्ष सेवा गर्न प्रतिबद्ध छौं।
यो पुरानो यात्रामा जानको लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद, र हामीसँग आठ उत्कृष्ट वर्षहरू मनाउनु भएकोमा धन्यवाद!